Radio Sudoorawaz 95 Mhz भु–क्षय बाढी पहिरो भित्रि मधेशको मुख्य चुनौती
शुक्रवार जेठ २५, २०७५ रेडियो सुदूर आवाज
डडेल्धुरा- हामि संग जे जती स्रोत साधन र बजेट छ त्यो अनुसारका योजना सञ्चालन गर्छौ । रंगुन नदी तट बन्धको गुरु योजना नै भनौ अहिले बजेटको अभावले योजना प्रभावित भएको छ । नँया आर्थिक बर्षमा पनि बजेट छैन भन्ने सुनिएको छ । यो दुर्भाग्य हो । नेपाल सरकारले टेक्न लगाउने अनि पैसा दिन नसक्ने यो समस्या हो । डडेल्धुराको भित्रिमधेश जोगबुढा क्षेत्र परशुराम नगर प्रमुख भिमबहादुर साउद संग पुष्कर भण्डारीले गरेको कुराकानि :
एक बर्ष हुन लाग्यो तपाई स्थानिय जनप्रतिनिधी चुनिएर आएको पनि के कसरी सञ्चालन गरि रहनु भएको छ । परशुराम नगरपालिका लाई ?
हामिले यो समयमा चुनावका बेला जुन केही जनताका माझमा प्रतिबद्धता जनाएका थियौ ति प्रतिबद्धताका आधारमा रहेर १२ वटै वडा कार्यालय बाट जनतालाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छौ । पहिलो काम जनताको घरदैलोमा सेवा भनेर यो ग¥यौ भने अर्काे काम कतिपय स्थानमा सडक बाटो थिएन अहिले ११ वटा वडामा सडक पनि पुगेको छ । दुई नं. वडामा सडक थिएन । अहिले दुई नं. वडा लाई पनि सडक सञ्जाल संग जोड्ने भनेर तिब्र गतीमा काम गरी रहेका छौ । अन्य कार्यालयका काम निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुदै आएका छन ।
भने पछि सडक लाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरि रहनु भएको हो ?
त्यसका साथै करिबन हामिले २६ करोड विकास निर्माणका लागी आएको रकम मध्ये अरु बर्षका तुलनामा थुप्रै काम भएका छन । अहिले हामिले शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्र, खानेपानि, सिँचाई , गोरेटो बाटो लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि उतिकै रुपमा काम गरि रहेका छौ । यहाको त्रिबेणी क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पस बनाई सकेका छौ भने, जुन चुनावका समयमा बाचा पनि गरेको थिए । परशुराम धाममा रहेको संस्कृत बिद्यालयलाई पनि आंगिक रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेका थियौ यसको पनि केही हदमा सफल भएको छ । नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ । जोगबुढा अस्पताललाई हामिले कम्तिमा पनि २५ देखि ५० शैयाको बनाउने भन्ने सोच बनाएका थियौ । यस लाई पनि सरकारले ५० शैयाको बनाउने भनेर घोषणा गरि सकेको छ । परशुराम धामलाई धार्मिक पर्यटकिय रुपमा विकास गर्ने पनि भनेका थियौ । यसको डिजाई ईष्टमेट पास भएर टेण्डरको प्रक्रियामा छ ।
तपाई निर्माण व्यवसायी २० बर्ष पछि स्थानिय जनप्रतिनिधी भएर आउदा कस्तो अनुभव गर्नु भयो ?
हैन म निर्माण व्यवसायी भए पनि तत्कालिन २०४९ सालमा जोगबुढा गाविस अध्यक्ष भएर काम गरे । त्यस पछि जिल्ला विकास समितीको सदस्य पनि रहेकाले राजनितिक फिल्ड बाटै आएको हु । त्यई पनि बिचको जुन २० बर्ष द्धन्दकालमा मैले राजनिती बाट टाँढा रहेर आफ्नो निर्माण व्यवसाय लाई अगाडी बढाए । थुप्रै देश विकास भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माणमा काम गरे ।
स्थानिय तहमा हामि आईसके पछि हिजोका दिनमा कर्मचारीले चलाएको भएकाले पनि केही काम गर्दा अप्ठेरो महसुस त हुन्छ नै । त्यई पनि हामिले परिवर्तनका साथ समुनितिक कुरालाई आत्मसाथ गरेर परिवर्तन आएको छ भनेर काम गर्न सक्नु पर्ने तिब्र गतीमा जान सकेका छैनौ । प्रदेश संघियताको चुनाव, ऐन कानुन अष्पष्ट भएका कारले अलमल भयो तर पनि यो स्थितीलाई पार गरेर हामि अगाडी बढेका छौ । कुनै काम पुर्ण रुपमा रोकिएको छैन । धेरै वटा बिधेयक पनि अहिले पास गरि सकेका छौ । केही नियमावली पनि हामि बनाउदै छौ । प्रक्रियामा छ । आगामी दिनमा अझै यस क्षेत्रको विकास लाई द्रुत गतिमा बढाउदै छौ । यसका साथै यस क्षेत्रको सबै भन्दा पुरामो शिद्धनाथ बिद्यालयको विकासका लागी प्राबिधिक पुर्वाधारको रुपमा अगाडी बढाई रहेका छौ ।
चालु आर्थिक बर्षमा जुन परशुराम संग २६ करोड बजेट थियो यस लाई वडामा कसरी विनियोजन गर्नु भयो ? अनि आन्तरिक आय स्रोत के छ ?
सबै वडा लाई सम्मान तरिकाले बाडेका थियौ । आवश्यकताका आधारमा कुनै लाई बढी रकम पनि गयो । ५० लाख देखि अढाई करोड सम्म एक वडा लाई विनियोजन गरेका थियौ । आन्तरिक आए न्युन छ । आगामी दिनमा यस लाई बढाउने योजनामा छौ ।
परशुराम नगरपालिकाका मुख्य चुनौती र अवसरहरु के के हुन ?
मुख्य चुनौती भन्दा सबै भन्दा ठुलो समस्या भु–क्षयको हो । चुरे क्षेत्र संग जोडिएको नगरपालिका भएकाले भु–क्षयले गर्दा यहाको धेरै उर्वरा भुमी नोक्सान गरेको छ । तत्कालिन जोगबुढा दुई सिमलखेत अहिलेको परशुराम ६ भएको छ जुन त्यो पुरै वडा वस्ति नै बाढीले बगाएको छ । शिर्षमा, कलेना, कटालमा पनि बाढि पहिरोले बगाएको, पुरेको छ । साँदनी, पुन्तुरा खोलाले सताएई दुःख दिएको छ । परशुरामाको सबै भन्दा ठुलो समस्या भनेको नदी नियन्त्रण हो । वस्ति जोगाउन नै मुस्किल छ ।
यसका साथै अवसर भनेको यहाको खेर गईरहेको प्राकृतिक स्रोत साधानहरु हुन । नदीमा गिट्टी, वालुवा माथि उठेको अवस्था छ । यस लाई हामिले वैज्ञानिक ढंग बाट आई ई आई गरेर राम्रो संग सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने आमदानिको स्रोत बन्न सक्छ । ठाँउ पनि सुन्दर छ भित्रि मधेश हो । कृषिका लागी पनि उर्वरा जमिन प्रसस्त छ । जडिबुटीको सम्भावना पनि उच्च छ । सम्भावना धेरै बोकेको ठाँउ हो ।
परशुरामका दिर्घ कालिन सम्भावित स्रोतहरु अरु के के बन्न सक्छन ?
मैले भनि हाले गिट्टी, वालुवा, काठ, जटिबुडी लगायत अन्य वैन पैदारको ठुलो सम्भावना छ । यस संगै जनसंख्या बढी भएको क्षेत्र भएकाले एकिकृत आय करले पनि आय स्रोत बढाउछ । यतिले मात्रै पुग्दैन हामिले भोलिका दिनमा यहा उद्योगधन्दा जस्तै क्रसर, ईटा उद्योग खोल्न सकिन्छ । अन्य विभिन्न घरेलुमा आधारित उद्योगहरु पनि खोल्न सकिने निकै सम्भावना छ । परशुराम धाममा पर्यटनको ठुलो सम्भावना र महत्व छ । अहिले त्यसको गुरु योजना सहित बोल पत्रका रुपमा संरक्षण, सम्वद्र्धन संगै भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण गर्दै पहलमा हामि अघि बढि रहेका छौ । रंगुन नदीमा पुल बन्नै लागेको छ भने सडकको स्तरोउन्नती कालो पत्रे गरी फराकिलो बनाउने योजना हामि संग छ । प्राय सबै वडाका वस्ति वस्तिमा सडक पुगि सकेको छन । अब कुन स्थानमा कृषि तथा पशु जन्य चिज वस्तु उत्पादन हुन्छ यसको अध्ययन अनुसन्धान गरी उत्पादन मुखी स्थानिय बनाई रोजगारी प्रदान गर्ने छौ ।
तपाई स्थानिय सरकार प्रमुख पनि ? क वर्गको निर्माण व्यवसायी पनि ? निर्माण व्यवसायीको लापवार्हीका कारण भौतिक पुर्वाधारका कामहरु रोकिएका हुन्छन ? दुई वटैमा तपाई हुदा के लाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ?
म निर्माण व्यवसायी मेरो आफ्नो प्राली हो । अहिले मैले निर्माण व्यवसायको काम आफ्नो घर परिवार र कर्मचारीको जिम्मा दिई सकेको छु । म अहिले विसुद्ध राजनितीमा लागेर जनताको सेवा गरि रहेको हो । नगरपालिकाले बोलपत्र मार्फत गरेका विकास निर्माणका काम अधिकांस भई सकेका छन भने एक दुई काम अन्तिम चरणमा छन । जेठ भित्रै सम्पन्न हुन्छन ।
जुन तपाईले निर्माणको प्रशंग जोड्नु भयो । निर्माणका कतिपय ठाँउमा राज्यले निर्माण व्यवसायी मात्र काम गर्दैन भन्ने दोष दिन्छ । त्यसमा मेरो सहमती छैन । कुनै ठाँउमा कुनै निर्माण व्यवसायीले नगरेको हुन सक्छ । तर मुख्य कुरा के भने राज्यले डिजाईन ईष्टिमेट गरेर बोलपत्र आह्वान गर्छ । बहुवर्षिय ठेकाहरु निस्कन्छ बहुवर्षिय ठेका अनुसारको रकम छुट्याएको हुदैन । कतिपय ठाँउमा डिजाई स्पष्ट हुदैन । कुनै ठाँउमा मुआब्जाको समस्या छ । कुनै ठाँउमा डिजाईन परिवर्तनको समस्या छ । प्राबिधकको कमि छ । यि यस्ता कयौ कारणहरुले योजना सम्पन्नमा ढिलाई भएका छन भने, जँहा सम्म निर्माण व्यवसायी मात्रै दोष दिने ठाँउ छैन । देश भरीमा अहिले निर्माण व्यवसायीले पैसा नपाएर पनि काम रोकिएको अवस्था छ ।
निर्माण व्यवसायी लाई यस्ता समस्या आउन नदिन परशुराम सरकारले के गर्छ ?
हामि संग जे जती स्रोत साधन र बजेट छ त्यो अनुसारका योजना सञ्चालन गर्छौ । रंगुन नदी तट बन्धको गुरु योजना नै भनौ अहिले बजेटको अभावले योजना प्रभावित भएको छ । नँया आर्थिक बर्षमा पनि बजेट छैन भन्ने सुनिएको छ । यो दुर्भाग्य हो । नेपाल सरकारले टेक्न लगाउने अनि पैसा दिन नसक्ने यो समस्या हो । यसका लागी हामिले सम्बन्धित माननिय ज्युहरु लाई र निकायमा जानकारी गराई सकेका छौ । यो समस्या नओस भोलीका दिनमा जनताले दुःख पाउछन । भएका योजनाहरु पनि अलपत्र जाने हुन्छ । गुरु योजना यदी लागु गरे नेपाल सरकारले ईष्टिमेट स्विकृत गरेर बहुवर्षिय ठेका लगाई सके पछि काम गरेको पैसा दिनु पर्छ । नत्र काम गर्ने मजदुर पनि मर्छ व्यवसायी पनि । त्यो ठुलो समस्या हुन्छ भने अगाडी बढ्ने काम पनि प्रभावित हुन्छ भनेर यसका लागी हामिले सबैलाई अनुरोध गरि सकेका छौ ।